ပြောလိုက်ပါ FSX နှင့် FSXA ထွက်သုတ်တော်မူမည်ကြောင်း malware
စိတ်ကူး ပြောလိုက်ပါ FSX နှင့် FSXA ထွက်သုတ်တော်မူမည်ကြောင်း malware
1 months ago 10 တစ်နှစ် #606 by archangelmj12
im သင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှစ်စုံအမျိုးမျိုးသောက်ဘ်ဆိုက်များမှာ sim အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ downloads, ရှိထွက်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေး။ အဆိုပါအစီအစဉ်များကိုသင်ဖျက်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်မဟုတ်လျှင်သူတို့မှဆိုပါစို့နေသောလမ်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဖယ်ရှားရန်များအတွက် control panel ထဲက menu ကိုအတူသွားလျှင်ပြတင်းပေါက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နဲ့အစိမ်းရောင်အမျိုးအစား thru အလျင်စလိုမည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်သင်၏ဖိုင်များကိုအတွက်အချက်အလက်များ၏အားလုံးပျောက်ဆုံးမည်ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်ဤဈ2လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း uninstall လုပ်ဖို့ သွား. ဤမျက်နှာပြင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်လေယာဉ်ကိုမြင်သောအခါအားလုံး 3500 စာရင်းနှင့်ကိုယ်ကယုံကြည် couldnt သုတ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သတိပြုမိသည်။ ငါ site ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်ဤသူတို့အားသတိထား လုပ်. ကိုယ့် site ပေါ်တွင်တားမြစ်ထားခဲ့သည်။ ငါ Ive တစ် 10 တစ်နှစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဒီဇိုင်နာသို့မဟုတ် programmer တွေ wasnt တစ်ဦးအချက်ကိုအဘို့ငါသိ၏။ Ive သုံးနှစ်တွင်ကာလအတွင်းအတူတူ2သယ်ဆောင်ကြိုးစားခဲ့နှင့် Ive ကာကွယ်ရေးပရိုဂရမ်းမင်း၏ဦးစီးဌာနနှင့်အတူဖိုင်တွေကို check လုပ်ထားနှင့်ဤအချိန်တွင် sniperspy နှင့်အမည်မသိယခုလိုဒေတာအမည်ရှိ malware များရှိသေး၏။ Sniperspy ယင်း၏ထိမိပါကပေးပို့သူနဲ့အဆက်အသွယ်စေသည်နှင့်သင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်အတိတ်လုပ်ရပ်များအဖြစ်ယခုလိုဝှက်ထားသောဒေတာများအပါအဝင်သင့်အချက်အလက်များကိုအားလုံးပြသငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆို, spyware ထားရှိရာတစ်ဦးနည်းလမ်းကိုနှင့်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ im weve အားလုံးဤမျှလောက်အချိန်အဆောက်အဦသုံးစွဲ, ဤအပေါ် 2007 အတွက် (သတ္တုတွင်းစတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်သင်တို့ကိုအသိပေး။ Weve အားလုံးကဖြစ်နဲ့နေမကောင်းအမြဲရပ်ရွာသိစေရန်ကြိုးပမ်းမှုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ဘာ program ကိုအောင်၏အစအဆုံးအကုန်မှတဆင့်ခဲ့ သူတို့ရဲ့ကာကွယ်မှုသည်။ ၎င်း၏ဝမ်းနည်းသည်ဤအထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်အဖြစ်ဝေးလေကြောင်းလိုင်းကိုသွားအဖြစ် sim အတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်။ Ive ဖန်တီးသူကိုဆက်သွယ်ပေမယ့်မအောငျဖို့ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လုံခြုံပျံသန်းဖူးနှင့်သတိထားပါနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်နှင့်လာမယ့် downloads, စောင့်ကြည့် ကမ္ဘာ၏ပူပဒေသများ။ Im သာသန်းပေါင်းများစွာထဲကတစ်ခုနှင့် 'to yahoo မှတဆင့် hacked နှင့်နေမကောင်းဈကမ္ဘာတဝှမ်းဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကျပ်အတည်းငြိမ်းမည်ဟုဆန္ဒရှိ ya ပြောပြခဲ့ဝါရင့်ထဲက။ Rikoooo, ရန်နေရာကောင်းနှင့်အတူကြှနျုပျတို့အားလုံးပေးဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင် သွားနှင့်တစ်ဦး &% # @ ပေးသည်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်း? !!!! .
1 months ago 10 တစ်နှစ် #607 by Gh0stRider203
တကယ်တော့ sniperspy အရာအားလုံးထက်ကနေလွတ်လပ်သောရဲ့ဝေးလံခေါင်သီစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး software ဖြစ်ပါသည်။
သင်တို့သည်ဤတောင်းဆိုမှုများ back up လုပ်ထားဖို့ဘာမှတယ်?
1 months ago 10 တစ်နှစ် #610 by archangelmj12
သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားနှင့်ပရိုဂရမ်နှင့်အတူထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသောဒေတာများကိုဖတ်၎င်း၏ကောင်းစွာ 15 နှစ်အတွင်းအွန်လိုင်းပင်ပညတ်တိအများအပြားအဖွဲ့အစည်းများ, တချို့ကအသုံးပြုသည်၎င်း၏ program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဈသတိပေးထွက်စလှေတျတျော, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးသံသယရှိလျှင်ကိုယ်အစောပိုင်းကပြောခဲ့သလို, အကျော်ကြားဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘော onlineline ကို download လုပ်ပါက၎င်း၏အားလုံးမိတ္တူများနှင့်ငါသူလျှိုဒဏျကွေးမှသတ်မှတ်ထားသောအစီအစဉ်ကိုထက်အခြားမည်သည့်သိ dont ။ ငါကအတှေ့အကွုံ thru လူတွေကိုသတိပေးထက်သူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အကြည့်ဖို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်နေသေးတယ်။ အမှန်တရား thatsI ဈများသောအားဖြင့် blogging သို့မဟုတ်ဘာမှပေါ် remarking မှရှောင်ကြဉ်သင်သည်အဘယ်ကြောင့် Hacking ကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်သက်သေပြမယ့်အနေအထား၌ထားပါ၏တဲ့အခါ, ကိုယ့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်အမည်ရန်ရှိသည်, သို့သော်ဤအမှု၌ကိုယ်က program ကိုသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ၏ကနဦးဖန်တီးသူအားဖြင့်ပြုသောအမှု wasnt ကိုငါသိ၏။ အထူးသဈကလူဝေးလိုက်ဖို့မသကဲ့သို့ဆိုက်သတိပေးချင်တယ်။ im im အသစ်တစ်ခုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်စာရင်းဝင်သော်လည်း၎င်း၏အစပိုင်းကတည်းကသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာခဲ့တဲ့တကယ်တော့ Ive တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင့် site ပေါ်တွင်ဘာမှ post သွားဘူး။ ငါ 2008 သို့မဟုတ် 2009 အတွက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Ive Seattle ထဲက Microsoft ကအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ပြဿနာများနှင့်သတိပေးချက်များအပေါ်သူတို့ရဲ့ Tech MSFS ပေမယ့်တစ်ဦး microsoft အစီအစဉ်နှင့်သို့မဟုတ်ကွန်ရက့်ကမ္ဘာ့ကွန်ပျူတာများ 98 ရာခိုင်နှုန်း thru run သောအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပျက် thru run သောဘာမှနှင့်၎င်း၏ကွောငျ့မသာ ပြဿနာတစ်ခု၏ကြီးမားသောကမ္ဘာ့ကွန်ပျူတာများ၏တာက MS ပရိုဂရမ်တွေကိုအသုံးပြုလို့ပဲ။ Nuff ကဆိုသည်။
1 months ago 10 တစ်နှစ် #612 by Kyrelel
သငျသညျကလူအခြို့သော downloads, ရှင်းလင်းခုတ်မောင်းချင်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်သူတို့တမင်တကာမရေဖြစ်ခြင်း၏အစားတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ / ရှိရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်မဟုတ်လော
0.230 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်